August 2010 | AA ZIMBABWE
Germany to Fund Clinic Expansion
Submitted by AA Zimbabwe on Thu, 2010-08-26 21:49
Germany to Fund Clinic Expansion - The City of Kerman in Germany will fund the rehabilitation and expansion of Runyararo Memorial Clinic here into a major referral hospital. [All Africa : Zimbabwe]
Regional Leaders Endorse Ultimatum to Government
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-08-22 23:33
Regional Leaders Endorse Ultimatum to Govt - SOUTH African President Jacob Zuma says ZANU-PF and the two formations of the Movement for Democratic Change (MDC) should resolve, within a month, outstanding issues threatening the government of national unity (GNU). [All Africa : Zimbabwe]
Mugabe - Let's Be Ourselves
Mugabe - Let's Be Ourselves - Zimbabwean President Robert Mugabe this week told regional leaders attending the 30th SADC Heads of State and Government Summit in Windhoek that there was no need for the leadership in the region to kowtow to Western interests as they have the means to become masters of their own destiny since southern Africa was awash with natural resources. [All Africa : Zimbabwe]
20,000 Nationals Face Deportation from Britain
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-08-22 23:32
20,000 Nationals Face Deportation from Britain - At least 20,000 failed Zimbabwean asylum seekers in the United Kingdom could be deported before the end of the year as a result of the relative economic and political stability in the southern African country following the formation of a unity government. [All Africa : Zimbabwe]
Mugabe, Tsvangirai Disagree on Polls
Mugabe, Tsvangirai Disagree on Polls - A ROW is brewing within the inclusive government over the timing of the next elections and the level of Sadc's involvement in any such polls as regional leaders increasingly view fresh free and fair polls as the way out of Zimbabwe's decade-long political stalemate. [All Africa : Zimbabwe]
ZMDC Executives Financial Scandal Deepens
ZMDC Executives Financial Scandal Deepens - THE financial scandal rocking state-owned Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) has deepened amid further revelations that the company's suspended top managers, including CEO and general manager Dominic Mubayiwa, invested millions of dollars in the money market while the corporation's mines were being closed. [All Africa : Zimbabwe]
Farmers Reluctant to Use Float Trays
Farmers Reluctant to Use Float Trays - Many small-scale tobacco farmers in Mashonaland West and Central have expressed reluctance to switch to the float tray technology, saying it is labour intensive and poses too many technicalities for the ordinary producer. [All Africa : Zimbabwe]
Indigenisation Moves Gear Up
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-08-22 23:31
Indigenisation Moves Gear Up - Government has now set up 13 sectoral committees to facilitate the development of implementation modalities for the Indigenisation and Economic Empowerment Act. [All Africa : Zimbabwe]
Things Falling Apart in MDC-T - Last Sunday's MDC-T provincial elections in Chitungwiza gave Zimbabweans a foretaste of what to expect at the party's national congress due next year. [All Africa : Zimbabwe]
Fiscalised Tax Registers, Memory Devices Launched
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-08-22 23:30
Fiscalised Tax Registers, Memory Devices Launched - Value Added Tax collection will improve by about 20 percent following the operationalisation of the fiscalised tax registers and fiscal memory devises to be implemented on October 1. [All Africa : Zimbabwe]